Archive du 20170922
Vono olona mahatsiravina Nodorana ny trano, nosemporina izy 6 mianaka
Nitrangana vono olona nahatsiravina indray tao amin’ny fokontany Ambatovaventy-Distrikan’Antanifotsy ny alin’ny alarobia hifoha alakamisy 21 septambra lasa teo.
Faneva Raholdina “Ny lalàm-pifidianana tamin’ny andron’i Dada no tena mety”
Nivoaka tamin’ny fahanginana omaly i Faneva Raholdina, mpandalina politika mikasika ny resaka nandeha tamin’ny fahilatalavitra iray momba azy ny faran’ny herinandro teo .
Fanavaozana ny tanànan’Antananarivo Hanampy ny japoney
Nandinika ny drafi-panajariana fanavaozana ny tanànan’Antananarivo sy ny tetikasa goavana Tatom (Antananarivo Toamasina Madagasikara) teny amin’ny lapan’ny tanàna Analakely omaly ny Jica (Japan International Cooperation Agency),
Trafikana Sokatra «Angonoka» Tanora tsy an’asa no mpanao azy
Tandindomin-doza ary tena atahorana ny tontolon’ny sokatra «Angonoka» eto Madagasikara.
Fifanakalozana ara-barotra amin’i Madagasikara Mihazakazaka ny Sinoa
Nisokatra omaly teny amin’ny CCI (Centre de Conférence Internationale) Ivato ny «China Exhibition Madagascar.
Taom-baovao iraisan’ny Malagasy rehetra Nankalazaina teny Ambohimanga, omaly
Nankalazaina nanomboka omaly alakamisy 21 septambra teny Ambohimanga ny taom-baovao iraisan’ny foko 18, karakarain’ny Komity Mpikarakara ny taona vaovao iraisan’ny Malagasy eto Madagasikara sy ny komity MAMAFI na Malagasy Mampiray Firenena.
Fanadinan’ny CNTEMAD 75% ny taham-pandraisana anjara
Hifarana anio zoma manerana ny Nosy rehefa naharitra dimy andro ny fanadinana enim-bolana faharoa tanterahin’ireo mpianatry ny sekoly ambony CNTEMAD manerana ny Nosy.
Holafitry ny sekoly ambony mpampianatra ho mpitsabo Hanenjika ireo sekoly tsy ara-dalàna
Iray volana lasa izay no tafatsangana teto amintsika ny holafitry ny sekoly ambony mampianatra ho mpampivelona sy ho mpitsabo.
Hetsika Volambita Hamerenana ny hasin’ny kolontsaina
Nigadona ny Volambita, fetin’ny Fihavanana izay karakarainay, hoy ny avy eo anivon’ny fikambanana Iray Madagasikara. Eo no fotoana hanehoana ny maha Malagasy antsika. Amin’ity takarivan’ny 22 septambra ity, manomboka amin’ny 7 ora sy sasany hariva etsy amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely, araka izany, no hankalazana sy hanandratana ny Fihavanana.